fa hiady amin'ny heriny manontolo an'ireo dahalo ambony latabatra, toy ny mpiasam-panjakana na ny olom-boafidy manao ny tsy mety, mihoa-pefy ary manao kolikoly sy manao ramatahora na manararoa-pahefana. Nanamafy moa ny ministry ny fitsarana, Johnny Richard Andriamahefarivo, fa tsy azo nandeferana hatramin` izay ny kolikoly ka tokony hotohizana ny ady ataontsika rehetra amin` ny kolikoly. Mila manova toe-tsaina ny rehetra ka hampihena ny kolikoly. “Ny ratsy tsy kely lalana. Mora no miteny saingy sarotra no mahita sy manenjika. Miova aloha ny toe-tsaina na tomponandraikitra na ny olona hiantefahan` ny asam-pitsarana ihany koa. Aoka izay ity fahazarana mitady olona hikarakara na mitady vahoalana hafahafa mianga amin`ny tsolotra.”